PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - Lifezekile iphupho lokuvuswa kwesonto
Lifezekile iphupho lokuvuswa kwesonto
Elidala lahlaselwa yisiphepho emini libalele
Ilanga - 2017-09-14 - Izindaba - INTATHELI YELANGA
IBIHOLWA nguMbhishobhi Pius Dlungwane CMM, inkonzo yokubusiswa kwemishini yebandla lamaRoma aKhatholika, iSt Thomas eseFrankland ngaphansi kukaMasipala wesiFunda uGu, eningizimu yeKwaZuluNatal esiyakhiwe kabusha.
Isakhiwo esidala - esasakhiwe ngeminikelo eyayicelwe nguMfu Vitus Werner phesheya ngowe1990 - sihlaselwe yisiphepho emini libalele, ngowezi-2007, lwahamba lonke uphahla, kwaqhekezeka nezindo-nga ngendlela yokuthi kasibange sisasebenziseka.
Kusukela lapho, amakholwa ale mishini aphoqeleke ukuhamba ibanga elide eya esontweni laseAssisi nxa kudingeka ukuba ayokhonza noma eyokwenza eminye imicimbi eyisibopho sebandla.
Kwehla lesi sehlo nje, kawusekho umbele wemali yeminikelo - evela emazweni aphesheya ebilekelela amaKhatholika eNingizimu Afrika.
Egqugquzela amakholwa esifunda sase-Assisi, uMfu uSandile Dlamini - oqale umkhankaso wokuqoqwa kwezimali zokuvuselelwa kwale ndlu - uwakhumbuze isexwayiso sikaMbhishobhi Alpho- nse Streit CMM ongasekho, sokuthi amakholwa “sekuzodingeka ukuba asine ezishayela wona ihlombe” - okwakusho ukuthi sekufanele imali iphume emakhikhini awo ngqo amakholwa.
Kuthe noma uMfu uDlamini esedluliselwe kwenye imishini, uMfu Ntuthuko Mtshali othathe isikhundla sakhe, wabhukula wawuqhuba ngomfutho omkhulu umkhankaso, yavuswa indlu yesonto njengoba ibibusiswa nje. Libatshazwe kakhulu neqhaza elibanjwe yisigungu sase-Assisi ngokusingatha umsebenzi wokuvuselelwa kwale ndlu.
Entshumayelweni yakhe, uMbhishobhi Dlungwane, ucaphune indaba esencwadini kaJohane, lapho uJesu ecela amanzi kowesifazane waseSamariya, emthonjeni kaJakobe.
UJesu uphetha ngokutshela owesifazane ukuthi ukuba ubazi ukuthi ngubani ocela amanzi kuyena ngabe nguye owesifazane ocela amanzu kuJesu. Ufanise indlu yesonto ebusiswayo nomthombo womusa njengomthombo kaJakobe, lapho aba- ngena khona beyophuza amanzi omusa kaNkulunkulu ongunaphakade.
Uxwayise nangomkhuba wokulanda umlolozelo nje nxa kukhulekwa, wathi kufanele okhulekayo akuzwe ngaphakathi kuyena ukuthi umele iqiniso nabantu bakwazi ukwehlukanisa ukuphila komuntu okhulekayo, bangasho ukuthi “usibanibani uyasonta kodwa uwukuthi nokuthi.”
UMbhishobhi Dlungwane wazise amakholwa nangengqungquthela yentsha yamaKhatholika ezokuba ziyi-6–9 kuZibandlela (December) nonyaka e-Exhibition Centre, eThekwini.
Kuzobe kubuthene intsha evela e-Afrika eseningizimu, ngakho labo abangaphumelela ukuhlinzeka izihambeli ngendawo yokulala; ikakhulukazi ezivela ezindaweni ezikude, bacelwa ukuba basheshe bazethule ukuzinikela kwabo ukulekelela emabandleni abo.
“Uxwayise nangomkhuba wokulanda nje umlolozelo nxa kukhulekwa wathi kufanele okhulekayo akuzwe ngaphakathi kuyena ukuthi umele iqiniso nabantu bakwazi ukwehlukanisa ukuphila...
IGCINE ivusiwe le ndlu njengoba ibivulwa nje ngeledlule.
ISIPHEPHO sishiye abazalwane baseSt Thomas bengondingasithebeni ngowezi-2007.
UMBHISHOBHI Pius Dlungwane evula indlu yesonto